recommendation Archives - LODGGY
ဒီတစ်ပတ်အတွက် Hotel Review အနေနဲ့ ကလောမြို့က Unique Bed and Breakfast ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ တည်နေရာ ကလောမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ Unique Bed and Breakfast hotel ကတော့အေးချမ်းပြီးနေလို့ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလောကားလမ်းကနေပြီးဟိုတယ်ရှိတဲ့တောင်ထိပ်ဆီ ၁၀မိနစ်လောက်သွားရပါတယ်။ ဟိုတယ်ကနေကားလေးနဲ့လာကြိုပေးပါတယ်။ ဟိုတယ်အနေအထား Unique bed and breakfast hotel က…
KEINNARA LODGE LOIKAW (LODGGY REVIEW) Founded in 2015, Kiennara Lodge Loikaw was one of the first “luxury” hotels in Loikaw, the capital of Kayah State. It is less than…
I hope you are either preparing or have already planned to go travel because it is already ravel season. We can make some mistakes when we travel toanew…
မနေ့ကတော့ ပုဂံ Tour Guide လေးရေးပေးပြီးတော့ ဒီနေ့တော့ ဘားအံအလှည့်ပေါ့။ ဘားအံကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၁ညအိပ် ၂ရက် ခရီးကလုံလောက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့လည်း အလွန်ဆုံးကြာမှ ၆နာရီ ခရီးပဲကိုး။
ပုဂံ-ပုပ္ပါး ၃ညအိပ် – ၄ရက်ခရီး
ပွင့်လင်းရာသီလဲ ရောက်ပြီ၊ အောက်တိုဘာမှာကလည်း ပိတ်ရက် ၅ရက်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ ခရီးသွားဖို့ ကြိုစီစဉ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိရောပေါ့။ ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားမယ့် သူတွေရော ရှိမလား မသိဘူး။ ဒီလို မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး အချိန်တွေမှာ ပုဂံကို တကယ်သွားလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ယုံလိုက်ပါ။ ပုဂံကိုသွားတဲ့အခါ လူလဲသက်သာ အဆင်လဲပြေအောင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ ဆိုတာကို lodggy.com ကနေ Tour Guide…
ဟိုတယျတျောတျောမြားမြားမှာ တညျးခိုစားရိတျအပွငျ အခွားမထငျမှတျထားတဲ့ အပိုကုနျကစြားရိတျ အခြို့ရှိတတျပါတယျ။ ဥပမာ ငပလီမှာဆို လဆေိပျကို လာကွိုပေးတာမြိုးပေါ့။ ဒီလိုမြိုးအခကျြလေးတှကေို ကွိုပွီးသတိထားနိုငျဖို့ list လေး လုပျပေးလိုကျပါတယျ။ Telephone ဟိုတယျပွငျပ ဖုနျးချေါဆိုတာတှအေတှကျ ကသြငျ့ငှပေေးခြေ ရမှာပါ။ ဟိုတယျတိုငျးလိုလို ဖုနျးပွောတာအတှကျ ပိုကျဆံ ကောကျကွပါတယျ။ Laundry အဝတျအစားတှေ လြှျောမယျဆိုရငျလညျး အဝတျအမြိုးအစား အလိုကျ ကသြငျ့ငှေ ပေးရမှာပါ။…
Acoustic Bars in Yangon
Acoustic Bars in Yangon Hard Rock Hard Rock is located at 192,Kaba Aye Pagoda Road | Myanmar Plaza, 4th Floor, Yangon. Hard Rock isanice place where you can enjoy great music…
As we all know, Monsoon in Myanmar receivesalot of rain and its soggy and wet. But still, there are many places left which you won’t seealot…